PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - INGEBHE KUBAFUNDI ABANOKUKHUBAZEKA BASE-UNIZULU NGESIKHULU "ESIPHUTHAZANAYO"
INGEBHE KUBAFUNDI ABANOKUKHUBAZEKA BASE-UNIZULU NGESIKHULU "ESIPHUTHAZANAYO"
Ilanga - 2018-11-08 - Izindaba - CEBO BUTHELEZI
KUVELA izindaba okuthiwa sezivuse ingebhe kubafundi abaphila nokukhubazeka e-University of Zululand (Unizulu), KwaDlangezwa, eMpangeni, okuthiwa bakhala ngesikhulu esibaphuthazayo uma beyofuna usizo ehhovisini laso.
Lo mkhuba kuthiwa uqale ngo2016. ILANGA lincinzwe indlebe ngomunye wabafundi obeyilungu leSRC mayelana nalolu daba, ophume kulo nyaka njengoba bekukhethwa ubuholi obusha.
Umfundi othi uyisisulu - naye ocele ukungadalulwa ngenxa yokwesaba ukuthi hleze aphazanyiswe esikoleni - uthe: “Ngiphila nesifo esingalapheki kalula, ngiye ehhovisi lika… (emgagula ngegama) ngo-2016 ngiyofuna usizo, ungibuze ukuthi ngiseyitshitshi yini, ngampendula ngathi yebo.
“Ungibuze ukuthi mangizizwa nginomuzwa wokuba nomuntu we- silisa ngenzenjani, ngathula ngangampendula. Usukumile wacela ukunganga ( hug) ngavuma, wangibambela eduze wafuna ukungiqabula, nganqaba.
“Ungitshele ukuthi ubengeke angiqabule, ubefuna sihlanganise iziphongo njengabantu abafundile,” kusho isisulu.
Kunezigameko ezahlukene okuthiwa zibikiwe kodwa kakukho okutheni okwenziwe ngazo. Kuzona kubalwa esokuhlanjalazwa komfundi wesifazane onebala elimhlophe, obizwe ngesishawa nguzakwabo.
Esinye ngesomfundi ozame uku- dlwengula uzakwabo ohamba ngomlenze wokufakelwa.
Lesi sigameko kuthiwa senzeke ezindlini ezihlala abafundi, isisulu sisizwe wukumemeza sasizwa ngabanye abafundi.
Sithintwa yiLANGA isikhulu esisolwayo odabeni lwabakhubazekile, sithe: “Kokubili lokhu kakulona iqiniso (ukuhlukumeza ngokocansi nokungahlinzekwa ngezinsiza kwabakhubazekile ehhovisi laso). Kangiyazi nokuthi isuka kuphi le nkulumo, kodwa ingamanga. Ngokwazi kwami abafundi bayazithola izidingo esikwaziyo ukubahlinzeka ngazo.”
Okhulumela umnyango obhekelele abafundi abaphila nokukhubazeka kwiSRC, uMnu Thami Mthiyane, uthe sekukaningi bebika ngendlela abafundi abakhubazekile abahlukumezeka ngayo.
“Lokhu kukhombisa ukuthi abafundi abaphila nokukhubazeka basacindezelekile kulesi sikhungo. La macala okuhlukumeza ngokocansi ngeke asukunyelwe ngokushesha ngoba kuyacaca ukuthi kasibalulekile kulesi sikhungo,” kusho uMnu Mthiyane.
Okhulumela i-Unizulu, uNkz uGcina Nhleko, uthe njengenyuvesi izinsolo ezithinta ukuhlukumeza ngokocansi bazithathela phezulu, baphenye ngakho konke okusuke kushiwo.
“Konke esikwenzayo sikwenza ngokuhlonipha umgilwa nomsolwa, ngokuba silandele umthetho wezwe. Lolu daba (lokuhlukumeza ngokocansi) sike saluzwa, sazama ukulusebenza kusukela lubikwe mhla ka-14 kuMandulo (September) 2018 nguMnu uSiyaya obephethe kulo mnyango wabaphila nokukhubazeka kwiSRC. Izincwadi zifike kithi kukhona nebhalwe ngobezifihlile, ethi ungumgilwa.
“USiyaya unxuswe ukuba alandele imigomo yokudlulisela lolu daba enyuvesi. Kube nemihlangano eminingana uMnu uSiyaya ecelwa ukuba abe khona kuyona nokuba alethe ubufakazi ngalolu daba, kepha ubengatholakali.
“Uphinde wanxuswa ukuba alethe abagilwa ukuze baphumele obala, basizwe kodwa kakukaze kwenzeke lokho. Kumanje kabukho ubufakazi esingabusebenzisa ukusebenza lolu daba,” kusho uNkz Gcina.
UMnu uLunga Ngqengelele, woMnyango wezeMfundo ePhakeme, uthe kabahambisani nokuhlukunyezwa kwabafundi ngokocansi futhi bazigxeka kakhulu lezi zinsolo uma kungaba wukuthi ziyiqiniso.
Usukumile wacela ukunganga ngavuma, wangibambela eduze...